Will 2016 Makube unyaka lapho ngokoqobo virtual udlala Ukhumula? - Izindaba Rule
Will 2016 Makube unyaka lapho ngokoqobo virtual udlala Ukhumula?
I wave lokuqala VR earphone bavele, kodwa ngokushesha Oculus Rift, HTC Vive and PlayStation VR lizoqhubeka ukudayiswa - futhi uzoba okuningi, ngingcono kakhulu
Lesi sihloko osesikhundleni “Will 2016 Makube unyaka lapho ngokoqobo virtual udlala Ukhumula?” lalotshwa Alex Hern, The Guardian ngoMsombuluko ngomhla ka-28 December 2015 11.00 UTC
engokoqobo Virtual liyeza. 2016 uzobona ukukhululwa kwe wokuqala ezingathi sína umthengi VR earphone for 20 iminyaka.
In the ikota lokuqala lonyaka, VR amaphayona Oculus (isishintsha Facebook, kusukela ukuze $ 2bn (£ 1.3bn) buyout in March 2014) bazosungula version yabathengi Ama-headset we zabo Rift to the world. Ngo April, HTC Taiwan bazosungula uhlelo Vive, elinye PC peripheral ithuthukiswe ngokubambisana ne udlala ngokuqinile Valve. Futhi esikhathini esithile onyakeni - kungenzeka ibe nengxenye yokuqala - Sony bazosungula PlayStation yayo VR, i add-on for the PlayStation 4, oyoletha VR ekamelweni lokuphumula.
Labo earphone akuzona ngowokuqala emakethe, by elide. In 1995, Nintendo wakhulula Virtual Boy, -earphone we monochromatic lowo owathembisa ukunikela kweqiniso 3D ihluzo in udlala ngokokuqala ngqá. A clunky, idivayisi desk-agibele amahhashi ukuthi athengiswe ngemali $180 ($280 in 2015 dollars, noma £ 189) futhi wanika abasebenzisi eqhekeza ubuhlungu bekhanda, it wathengisa ngokulambisa waba yingxenye yeshumi yalokho Nintendo yayifisa futhi kwayekwa esingaphansi konyaka kamuva.
The Virtual Boy kwaba ukuhluleka ovelele igagasi lokuqala esingokoqobo virtual, kodwa bonke babehlanganyela nxi. Ubuchwepheshe umane wayengekho lapho: izikrini kwakungewona high-nesinqumo ngokwanele ukuba ibekwe ukuthi sekuseduze ukuba amehlo, abakwazanga uvuselele fast ngokwanele ukwethula isithombe bushelelezi, futhi zonke izilimi ngemuva kwabo akakwazanga ukusunduza pixels ngokwanele ukuba enze izwe obukholisayo. Ukuhluleka 90 wave esingokoqobo virtual kwaba ngokuphelele kangangokuba sabulala endle isizukulwane.
Okunengi udumo ukuvuselelwa VR aye komunye umuntu: Palmer Luckey, umsunguli Oculus. Yethuliwe umphakathi umkhankaso Kickstarter, Ama-headset we yakhe Rift wakhulela $ 2.5M e 2012. It siqale igagasi nesithakazelo ensimini ukuthi uyaqhubeka kuze kube yilolu suku. Ukhishwa Inyumbazane embonini ubuchwepheshe, Luckey awuzange emaphathini ukuhlakanipha wathola ukuthi VR kwaba umdlalo yesiwula. Wacabanga ukuthi akunankinga, futhi kanjalo wenza okungaphezu kokumane 9,000 abanye.
Palmer Luckey, co-umsunguli Oculus. Photograph: Bloomberg nge Getty Images
Kodwa nje njengebalulekile, ngendlela ezungezayo, kwaba smartphone. Nakuba kungekho muntu ngabe ukuyichaza it njengoba Steve Jobs wema enkundleni futhi yabonisa iPhone wokuqala, ubuchwepheshe edingekayo ukuze wenze smartphone top-tier has ukufana okuphawulekayo ubuchwepheshe edingekayo ukuze wenze VR obukholisayo. High-isixazululo screen, olunembile motion izinzwa icwecwe kuzinto kukhona konke mkhulu smartphone yesimanje, kodwa uqamba futhi isinyathelo esisodwa ekwenzeni ngokoqobo virtual, kahle, engokoqobo.
Lokhu kwaqala kutjengiswe 2015 njengoba Google Cardboard futhi Samsung Gear VR bootstrapped ifomu eshibhile-and-bejabule of VR usebenzisa Smartphones. By slotting ifoni ibe isibonisi inhloko-agibele amahhashi, abayinikela ukufinyelela imihlaba elula virtual. Google Cardboard, ngokwesibonelo (ngokoqobo piece laser-ukusika amakhadibhodi, esetshenziselwa ephethe smartphone ehambisanayo endaweni) wanikwa away for free iNew York Times ngoNovemba, abhanqiwe nge uhlelo lokusebenza VR kusukela paper wasebenzisa "ukuze akwazi izigcawu ngokucebile ogxile kusukela embulungeni yonke".
Kodwa lapho isivuno nokuza earphone zihlukile kulezo abantu kulezi zicelo yilesi ngekhwalithi. Ngamafuphi nje: bayazivikela ngempela, okuhle ngempela.
A smartphone yesimanje inikeza isisekelo esiqinileko ngalo ozokwakhela kulo isengezo engokoqobo-earphone we-, kodwa awukwazi ukubamba ikhandlela idivayisi ozinikele. Futhi VR earphone ziye ngcono nje okushesha njengokungena Smartphones ziye ngcono. Lapho ngiqala wasebenzisa Oculus Rift e 2013 Ngangineminyaka underwhelmed. Lolu phiko, owawungumnyaka lesibili prototype umphakathi, kwaba clunky futhi ugly ngisho nangaphambi kokuba mina wasibeka phezu. Ukugqoka kwezwakala sengathi kokuba ungakhululekile ski goggles ska ebusweni bami, nokuxazululwa kwezinxushunxushu ngendlela kwesikrini uphansi ngokwanele ukuthi kwaba sengathi likhiphe ngesikhathi izwe ngokusebenzisa emnyango anezikhala. The demo - eyayinesihloko me ziboshelwa ibe roller coaster-- kwakungabaniki ukusiza, ne ukuqhathanisa sayo a ride Fairground ekhonza kuphela ukugcizelela isici okungabazekayo of yonke into.
Eminyakeni emibili kamuva, besebenzisa yokugcina pre-release version of the Rift emcimbini ihlelwe ngu Facebook, futhi ekugcineni ngabona ukuthi yini lena engaka bekukhulunywa ngani. Ukugqoka idivaysi izotholakala amashalofu esikhathini esingaphansi kwezinyanga eziyisithupha, Ngahlala mkhathi, nokubuka aqalaze ezweni isiphanyeko cavernous ngaphakathi it wahlala. A string of lights kuvuliwe phambi emkhunjini wami, okwaqala kuyashesha ngokushesha futhi ngokushesha kuze, kungazelelwe, kwavela kusukela ohlangothini enhlokodolobha umkhumbi omkhulu (engangizazi ngokuzibonela ngibone ukuthi ngingefinyelele craned intamo yami emva kwami), futhi ngasala sintanta Ukuzola isikhala. Kungaleso sikhathi lapho izitha ngembobo in ...
A Gamer ne-PlayStation VR Ama-headset we. Photograph: Chesnot / Getty Images
Umdlalo, Eva Valkyrie, ubelokhu ekuthuthukisweni iminyaka emibili, isiqala njengoba demo tech for the platform 2013. Manje usethe ukuba kube umdlalo kwethulwa for the Rift futhi Sony sika PlayStation VR, futhi ubani harbored amaphupho imfihlo dogfighting in space (iqembu Ngokuqinisekile lulukhulu kunanini ngaphambili kulandela ukukhululwa Star Wars).
Kodwa kukhona inkinga: kuyomelwe ukuba angiyise izwi lami. VR kuyinto elidume kunzima ngempela ukuthengisa. A video of Eva Valkyrie, kubukwe ku screen sakho, izobukeka into ekhethekile - nje omunye umdlalo isikhala. Ngoba, ngaphandle VR, yilokho-ke kuba. A video kimi ukudlala Eva Valkyrie Angajabula sibi kakhulu: intatheli ubuchwepheshe esihlalweni, gurning futhi writhing, ibhokisi elimnyama yinqaba eyibophele ubuso bakhe. Ngisho noma ngibukeka Nginezinkinga fun, kungcono ezingasehlela akuyona indlela engcono athengiselwe hardware.
Game developer Mike Bithell, ogama Volume: coda kuyoba omunye zeziqu yokuvula i-Playstation VR, okuvumelanayo nomongo ukukhathazeka, kodwa ucabanga ukuthi wow factor kuyoba sokunqoba ukuyinqoba kokuqala. "Ngokungangabazeki bheka silly kakhulu egqoke lezi zinto, kodwa uma ungathola abantu bezama nabo kwi zezitolo, noma iqembu imidlalo ulindela ngidlala nabangani, Ngiyabona uya big," uthena.
Related: Lisho ngokoqobo virtual kuyosho ukuthini yokukhangisa 2016?
Ngenxa yaleyo, Ukungena zakuqala olunikezwa izinguqulo eshibhile of VR ezifana Google Cardboard babengase counterintuitively konakalisa amathuba VR sika ukuthatha off. Abaningi ababekwa engakuthandi smartphone-eyibophele-to-your-face ndlela angathandi ukunikeza VR ithuba lesibili, ngisho noma izinguqulo esizayo bangcono kakhulu.
Akubona bonke bakhathazekile i isithiyo sokuqala, Nokho. Brian Blue umhlaziyi ngokuqinile Gartner athalalise ukukhathazeka: "Ngikholelwa ukuthi uma abantu bakuqonde oluyisisekelo idivayisi kweso baqonde amandla ayo, ngisho ngaphandle kokuzama eyodwa on. Umcabango ikhompyutha wearable akuyona yesayensi kulezi zinsuku abantu Qonda kahle ukuthi kuyini VR ayezokwazi ukubenzela kona. "
Ngoba Blue, ubunzima yangempela itholwa isinyathelo esilandelayo: "Le VR nakho kuncike ngokuphelele kudivayisi kanye ikhwalithi yokuqukethwe. Ngiyaqiniseka ukuthi kumadivayisi sokuqala kokudedelwa ngo 2016 zinhle ngokwanele, kodwa kungcono okuqukethwe ukuthi kufanele bangune abasebenzisi ozayo emuva. Kukhona yini okuqukethwe VR okuhle ngokwanele iphayiphi ukugcina abasebenzisi wahlanganyela namadivayisi ngokuhamba kwesikhathi? Kusukela zokuthi kukhona abanye enkulu VR imidlalo kanye nakho video ngakho angikhathazekile, kodwa ekugcineni lo mbuzo aphendule singakwazi kuze sibona indlela umphakathi jikelele iphendula lezi izinhlobo ezintsha amadivayisi Computing siqu kanye nokuqukethwe. "
Ngisho uma unqoba labo izithiyo, kukhona esinye elinde ekhoneni: izindleko. Kokubili Rift kanye Vive adinga wokudlala PC top-flight, okuyinto kubiza cishe £ 1,000, amandla amadivaysi - okuyinto ngokwabo banamathuba ukuqala azungeze £ 300. Against ukuthi, PlayStation VR, odinga £ 300 PlayStation kuphela 4 on top of siqu yayo (engashongo) intengo, uma kuqhathaniswa ezishibhile.
Ngenxa yalokho, "Ngizobe ahlale a super okuthakazelisayo zakuqala wamukela tech kuze kufike phansi intengo", Bithell uthi. "Kubalulekile ukukhumbula nokho ukuthi, kanti intengo lizophakama, siyakucela asikhulumi 'ukuthenga amathelevishini lokuqala 3D hit emakethe' amanani lapha. "Amanani cishe okusezingeni kwanele, Nokho, ukuvimbela i uphinda ngokushesha last crossover omkhulu hit kusuka udlala, Nintendo sika Wii.
Yilokho a shame, ngoba ezinye izindlela ezithakazelisa kakhulu VR kukhona kude udlala yendabuko. Kanye echumayo emkhakheni 360˚ cinema, okuyinto ubeka ababukeli maphakathi the shot futhi ebavumela ukuba uqalaza njengoba ubona kufanelekile, kukhona ukuba khona okusondelayo Facebook emkhakheni. Yokuxhumana akuyona into efika kuqala engqondweni yakho uma omunye ecabanga yokudlala - kodwa lokho akulona yini Mark Zuckerberg ukhathalela noma.
Related: Ikusasa ngokoqobo virtual itholakala ezandleni developers
"Cabanga nje ujabulela esihlalweni courtside at umdlalo, betadisha ekilasini labafundi nothisha emhlabeni wonke noma ubonane nodokotela ubuso nobuso - nje ngokuzenza Goggles ekhaya lakho,"Ebhala lapho kumenyezelwa yokufuna Facebook sika inkampani. "Ngokoqobo Virtual kwake kwaba iphupho yesayensi. Kodwa internet wayebuye kanye iphupho, ngakho-computer kanye Smartphones. "
Kodwa lokho eminye phansi line. Ngoba ngonyaka ozayo, umbuzo kuyoba ngabe isengezo engokoqobo-headset we-kungathatha indawo yayo esiteji udlala - futhi uma kunjalo, yiphi. Bithell ucabanga kanjalo. "Njengoba imikhiqizo, Bobathathu esiqinile futhi ukulungele nalezo zilaleli. Nakuba Angikho ngilindele ukuba ngokuphonsa TV yami in the tip elilandelayo Christmas, Ngicabanga ukuthi uzoba nesiqalo esihle kakhulu, ke kuba mayelana asekela impumelelo ne software futhi okushiwoyo okwengeziwe tech. "
Blue Gartner sika ucabanga ukuthi 'ngomnyaka owodwa kungesona isikhathi esanele ukuze uthole isithombe mazombe ikusasa VR ", kodwa ukuthi kuyinto "Ngokuqinisekile ngokwanele isikhathi ukuqonda ngokugcwele indlela Eminyakeni lembalwa yekucala VR technologies uyokwenza ezandleni abathengi".
Ngisho kwamanje, izinyanga ukuya waze wakhululwa, isimo virtual engokoqobo tech ekuhlaba umxhwele kimi. Ngiye ebhaliwe it off ngaphambi, okubangwa ukukhathazeka okuthikameza kuka-ethembisayo ngaphansi-kokukhulula ama kwakuyoba okuhlangana ngayo "dork isici"Ukukhiqiza into efika washona. Manje, Ngikhathazekile kuphela niqiniseke ngento eyodwa: Ngifuna omunye. Uma ufuna mina, Ngizobuya lowo ekhoneni, gurning futhi writhing nge smile ebusweni bami.
30143	0 Alex Hern, Analysis, I-Apula, Isigaba, Computing, Culture, Facebook, Izici, Imidlalo, Imidlalo aduduze, Google, HTC, kwesigaba Main, Mark Zuckerberg, Nintendo, PlayStation, Playstation 4, Smartphones, Sony, Technology, The Guardian, UK news, ngokoqobo Virtual, imihlaba Virtual
← Vula Self Yakho Ngcono Amandla Google Glass 2.0: izithombe kuqala ziyaphuma →